Shina: Ho vita hatreo ve ny politikan’ny zaza tokana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Aogositra 2009 17:08 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, македонски, Italiano, English
Araka ny voalazan'ny Time magazine, dia mety hiova ny politikan'ny zaza tokana, anankiray amin'ny maha shina an'i Shina ankehitriny. Taorian'ny fandrisihan'ny tompon'andraikitra momba ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana avy any Shanghai tao amin'ny gazetim-panjakana ny mpivady hiteraka roa vokatry ny fahanteran'ny mponina sy ny tahotra tsy hisian'ny ho avy mamiratra izany. Kanefa manoloana ny resabe naterak'io fanambarana io tany ivelany dia nametraka arofanina ity tompon'andraikitra ity ny 25 jolay 2009 ary nilaza fa efa nekena tany Shanghai ny fiterahana zaza 2 hatramin'izay ary tsy mampirisika ny kaominina handray fanapahan-kevitra mifanohitra amin'ny an'ny fanjakana akory izy.
Efa taranaka 3 nifandimby izay dia namelona zaza tokana hatrany ireo ray aman-dreny shinoa satria izay no notakian'ny lalàna momba ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana tany an-toerana. Kanefa ny fihetsiky ny kaominina any Shanghai izay mandrisika ny mpivady tanora hiteraka anankiroa hisorohana ny fahanteran'ny mponina ao aminy, tsy dingana voalohany ho an'ny mpitondra sinoa hanova ny politikan'ny fandrindram-piterahana ve izany?
Azo lazaina fa mandinika ity politikan'ny zaza tokana ity i Beijing ankehitriny, politika izay nitondra vokatra teo amin'ny fivelarana ekonomika niaraka tamin'ny fanovana nataon'i Deng Xioping 30 taona lasa izay, kanefa novidiana lafo ihany tamin'ny fanerena teo amin'ny lafiny ara-tsosialy izay navesatra sy toa nifanipaka.
Niteraka resaba teo amin'ny tontolon'ny bilaogy ity vaovao ity, tahaka ny maha resabe azy ihany koa any amin'ireo gazety maro any an-toerana. Ao amin'ny Foreign Policy dia milaza i James Downie fa fanovana lehibe no miandry ireo tanàn-dehibe sinoa:
Dingana lehibe ny fampidirana ity fanovana ity any amin'ireo tanàn-dehibe sinoa, ary hahaliana ny hahafantatra ny fe-petra horaisin'i Chine hialana amin'ny politikan'ny zaza tokana (politika mbola malaza).
Azo lazaina f a miteraka fikorontanana eo amin'ny mponina any Shanghai ity politika ity. Milaza ny momba ny vesatra holanjain'ny taranaka ho avy i Brendan Malone:
Mampatahotra an'i Shanghai tokoa ny tsy fahampian'isa, satria tsy ampy intsony ny tanora lahy sy vavy hiahy ny fahanteran'ny mponina.
Mpitoraka bilaogy hafa indray no milaza fa tsy ny lafiny ekonomika ihany no ovain'ity politikan'ny zaza tokana ity:
Politika nasionaly ny politikan'ny zaza tokana. Kanefa tsy midika izany fa tsy misy kianina ny momba azy, ary tsy natao ho mandrakizay koa izy io. Tamin'ny taona 70 dia nilaza ny governemanta sy ny solombavam-bahoaka fa natao haharitra 30 taona ihany ity politika ity, 30 taona aty aoriana, fotoana tokony hanajana ny teny nomeny amin'izay izao.
Satria tsy mety raha ny tanànan'ni Shanghai irery ihany no mahazo miteraka mihoatra ny anankiray:
Fa nahoana no Shanghai irery no mahazo manao izany? Fa angaha tsy ao anatin'i Shina izy? Efa nahazo tombony ara-ekonomika izy, ary ankehitriny koa dia mitady tombony amin'ny fahazoana miteraka mihoatra noho ny olona hafa? Laviko an-kitsirano izao ny hoe fihenana noho ny fahanterana.
Vehivavy iray avy any Sichuan, vavy tokan'ny ray aman-dreniny, dia mahita fa mafy tokoa izany hoe tsy afaka hiteraka afa-tsy anankiray ihany satria tsy mipetraka any Shanghai:
Raha avela hiteraka fanindroany ny ray aman-dreny dia tokony ho mahazo manao izany daholo ny mpivady rehetra eran'ny firenena. Fa maninona no ametrahana fe-petra sy lalàna be ohatr'izany eto amin'ny firenentsika afa-tsy Shanghai ihany? Manana rahalahy ny vadiko fa izaho kosa vavy tokana. Miasa sy monina lavitra ny misy anay izahay miaraka amin'ny zanakay lahy tokana. Te hiteraka vavy koa anefa izahay!
Milaza kosa ity mpitoraka bilaogy iray ity fa raha samy hiteraka fanindroany daholo ny sinoa dia misy fiantraikany koa izany:
Te hitombo bebe kokoa ihany angamba ity firenena efa be mponina indrindra eto ambonin'ny tany ity. Ity fijery vaovao ity, izay natao hampitoniana ny ahiahy lehibe ny amin'ny fahanteran'ny mponina sy ny fihenan'ny olona afaka miasa dia fihetsika ofisialy hanoherana ilay politika izay noheverina ho mahafa-po kanefa koa nahitana lesoka goavana. Raha natao fa handanjalanjana ny fitomboan'ny mponina izy ity, dia nitarika koa ho amin'ny fanalan-jaza antery.
Milaza i Chen Jibing mpanao gazety ao amin'ny bilaoginy fa ity fanovana ity dia miteraka ahiahy ihany ho an'ny mponina teratany avy any Shanghai:
Araka ny hevitro manokana dia misy antony eo amin'ny fisainana ny fanontaniana hoe “Mbola te hiteraka ve iaanreo?” Avy amin'ny tahotra eo amin'ny lafiny ara-koltoraly izany, mahakasika an'i Shanghai manokana sy ireo faritra any an-tsisin-tany mifanakaiky aminy.
Any Shanghai, heveriko fa manahy ireo ray aman-dreny tanora tahaka ahy ny hahita ny zanany tsy hahay hiteny Shanghai intsony. Raha mitohy izao zava-misy izao dia azoko antoka fa ao anatin'ny 30 taona dia tsy ho heno intsony ny teny Shanghai, izay teny fampiasa amin'ny tantara kely isan-karazany.